ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်ရှိ အိမ်ခြံမြေလိမ်လည်မှုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ဘီဘီစီသတင်းထောက် အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရ - Property News in Myanmar ::: iMyanmarHouse.com
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်ရှိ အိမ်ခြံမြေလိမ်လည်မှုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ဘီဘီစီသတင်းထောက် အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရ
ပြည်ပ အိမ်ခြံမြေ သတင်း | 21 Mar 2017 11:16 am | 813 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
Posted by ရွှေစင်ဝင်း (iMyanmarHouse.com) | အနှစ်သက်ဆုံးစာရင်းသို့ထည့်ရန်
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာကျော်အပန်းဖြေကျွန်းဖြစ်သော ဖူးခက်တွင် အိမ်ခြံမြေလိမ်လည်မှုတစ်ခုကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ဘီဘီစီသတင်းထောက်တစ်ဦးကို ထိုင်းရှေ့နေတစ်ဦးက
အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း ဘန်ကောက်အခြေစိုက် အိမ်ခြံမြေသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြသည်။
နိုင်ငံခြားသားကိုလည်း တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ပြစ်မှုထင်ရှားတွေ့ရှိပါက ဘီဘီစီသတင်းထောက် ဂျိုနသန်ဟက်ဒ်သည် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ကျခံရဖွယ်ရာရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြဌာန်းထားသော အသရေဖျက်မှုနှင့် ကွန်ပြူတာရာဇဝတ်မှုဥပဒေများသည် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းရယူသည့် စာနယ်ဇင်းကဏ္ဍကို ရိုက်ချိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကျင့်ဖျက်ခြစားမှုများ နေရာစုံဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မတရားမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ခက်ခဲစေလျက်ရှိကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုများက ပြောကြားသည်။
ဘီဘီစီသတင်းဌာန၏ အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာသတင်းထောက် ဂျိုနသန်ဟက်ဒ်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းက ဖူးခက်တွင် အငြိမ်းစား နိုင်ငံခြားသား ၂ ဦး အိမ်ခြံမြေအလိမ်ခံခဲ့ရပုံကို ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျိုနသန်ဟက်ဒ်သည် ဖူးခက်ရှိ တရားရုံးတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား၊ အငြိမ်းစားတစ်ဦးဖြစ်သူ အီယမ် ရန့်စ်နှင့်အတူ တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးလုံးက အပြစ်မရှိကြောင်း လျှောက်လှဲခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့၏ ပတ်စ်ပို့များကို တရားရုံးတွင် ပေးအပ်ထားရသဖြင့် ပြီးခဲ့သော ၂ နှစ်တာကာလအတွင်း ဂျိုနသန်ဟက်ဒ်အတွက် အာရှတစ်လွှား သတင်းထောက်အလုပ်လုပ်ရာတွင် များစွာ အခက်ကြုံရလျက်ရှိသည်။
ဖူးခက်မှ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သော ပရာတွန် သာနာရက်ခ်က တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန့်စ်သည် အငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဖူးခက်၌ အခြေချကာ ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး သားသမီး ၃ ဦး ထွန်းကားသည်။
ဖူးခက်တွင်ပင် ပေါင် ၁ သန်းနီးပါးတန်ကြေးရှိ အိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူခဲ့ပြီး မိသားစုနှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့သည်။
ထိုင်းဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိချေ။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသားများမှာ ထိုင်းတွင် အိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူရာတွင် ၎င်းတို့ပိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့ယုံကြည်ရသည့် ဒေသခံတစ်ဦးဦး၏ အမည်ဖြင့် ဝယ်ယူလေ့ရှိကြသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရန့်စ်၏ ဇနီးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏လက်မှတ်ကို အတုလုပ်ကာ ဖူးခက်ရှိ ငွေကြေးခဝါချသူများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များမှတစ်ဆင့် အိမ်ခြံမြေများကို ရောင်းချရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်းအား ရန့်စ်က သိရှိသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှုအတွက် ရန့်စ်၏ဇနီးသည် ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ရန့်စ်မှာလည်း အိမ်ခြံမြေများ ပြန်ရရန် တရားရုံးတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အမှုရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိဆဲပင် ဖြစ်သည်။
ဘီဘီစီသတင်းထောက် ဂျိုနသန်ဟက်ဒ်က စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်မှာ ရှေ့နေပရာတွန်သည် ရန့်စ်၏ ရှေ့မှောက်တွင်မဟုတ်ဘဲ နိုထရီသက်သေခံပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနှင့် အခြားနိုင်ငံအများစု မတူညီသည့်အချက်မှာ နိုင်ငံများစွာတွင် အသရေဖျက်မှုကို တရားမမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း
ထိုင်းတွင်မူ ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမာရွတ် ( ၁)ရပ်ကွက်မှ မြေညီထပ်ဌားမည်
3.90 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
ကမာရွတ် ( 1 )ရပ်ကွက် PISM ကျောင်းအနီး ရတနာလမ်း ( ဗဟိုလမ်း ကျောကပ်လမ်း) ၁၂ ၁/၂ပေ × ၅၀ ပေ အမြင့် ၁၇ ' အထပ်ခိုး အပြည့်ပါ သည် ၂ လွာ သုံးနိုင် သည်။ပေါ်ထပ်တွင် အိမ်သာပါသည် ရုံးခန်းဖွင့် ရန်...
For Rent Apartment on Bogyoke Road
$ 500 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ) | တိုက်ခန်း
One Bedroom/ Studio Apartment is available for short or long term. It is direct from owner and no agent fee will be charged. The room is on the 1st floor and facing the great view of St. Mary Cathedral on Bogyoke Road. The asking price is USD 500 per month and it is negotiable. Inclusions:2single bed with mattress Dining table with4chairs2seat sofa Coffee/ tea table Shoe cabinet Full size wardrobe Stand fan Air conditioner ...
မြေညီမှ တတိယထပ် အထိတိုက်ခန်း (၄) ခန်းငှားရန်ရှိသည်။ လူနေရန်၊ ဆိုင်ဖွင့်ရန်၊ ကျောင်းဘော်ဒါဖွင့်ရန်သင့်တော်ပါသည်။ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပါသည်။သာကေတမြို့နယ်၊ ဈေးနီး၊...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်း သမိုင်းလမ်းဆုံ City Mart, စိန်ဂေဟာ အနီး ၁၅ပေ×၄၈ပေ ၆လွှာ (Aircon ပါ ဓာတ်လှေကား ပါ) "ဧည့်ခန်း နှင့် အိပ်ခန်း ပါကေးခင်း မီးဖိုခန်း ရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း ဘေးနံရံများ...
( 13 x 50 ), Hall, Rcခင်း၊ ထပ်ခိုးပါ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရန်နေရာကောင်းဖြစ်ပါသည်။
တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်း ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာ ပါသည်။ ပါကေးခင်းထားပြီး တိုက်ခန်းရောင်းမည်
တိုက်ခန်းသန်ရောင်းရန်ရှိသည် .အမှတ် ၁၂၆(က+ခ) ဇီဇဝါလမ်း (၇)ရပ်ကွက်အရှေ့ သာကေတ.
540 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
အမှတ် ၁၂၆(က+ခ) ဇီဇဝါလမ်း (၇)ရပ်ကွက်အရှေ့ သာကေတ. ၁၅ပေ x ၅၀ပေ တိုက်ခန်း အသစ် Decoration , Furnitures, water heater , Air con ၃ လုံး , အခန်းဖွဲ့ပြီး ရောင်းရန်ရှိသည်.
09 777 289453
သံလျှင် ဗိုလ်ချုပ်ရွာ ခြံကွက် (ဒေါင့်)ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်
125 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
၁၂၅သိန်းဖြင့် သံလျှင်ခြံ ဒေါင့် ကွက် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ပါတ်ဝန်းကျင်သန့်သန့်၊ ညှိနိုင်းဈေး
740 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
၂၅×၅၀ တတိယထပ်​ တိုက်​ခန်းကျယ်ေ၇ာင်းမည်​။ သဃ်​န်းကျွန်း ဘဝမြင့်​ ​မေခ ​မေလိခအိမ်​၇ာအနီး ဘဏ်​ ​ကျောင်း ​ဆေး၇ုံ ကားဂိတ်​ ​ဈေးဝယ်​စင်​တာများနှင့်​နီးပြီး လမ်းကျယ်​...